Lock down နှင့် ဥပဒေ (Lock-Down ချချင်တိုင်းချလို့မရပါဘူး) – Android App Zone
Lock down နှင့် ဥပဒေ (Lock-Down ချချင်တိုင်းချလို့မရပါဘူး)
Posted on April 21, 2020 by thuneain
ကျေးရွာတွေမှာ Lock down ဆိုတာတွေခေတ်စားနေပါတယ်…ဒါကိုဥပဒေနဲ့ညီလားလို့မေးရင်…. “Lock down” ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကိုသေချာနားလည်ဖို့လိုပါတယ်…Lock down ဆိုတာ အန္တရာယ်ရှိတဲ့(ဥပမာ-ကူးစက်ရောဂါလိုမျိုး) အိမ်တစ်အိမ်၊ရွာတစ်ရွာ၊မြို့တစ်မြို့ စသည်တို့ကို အစိုးရအမိန့်အာဏာ အစိုးရအစီအမံနဲ့ ချမှတ်မှ lock downလို့မည်ပါတယ်။အဲ့ဒီလို lock down အချခံရတဲ့ နေရာဒေသကို အစိုးရက စားရေးသောက်တာ အရာကိစ္စမှန်သမျှကို လိုအပ်သလို တာဝန်ယူပေးရပါတယ်။
ဒါဆို လက်ရှိကျေးရွာတွေမှာ ဝါးတားပြီး ရွာလမ်းထဲကဖြတ်သွားဖြတ်လာတောင်မလုပ်ရဘူး အားလုံးကိုပိတ်ပင်ထားတယ်ဆိုတာ ဥပဒေနဲ့ညီပါသလား….?
ဥပ​ဒေနဲ့ မညီပါဘူး….မိမိရွာကိုလုံခြုံစေချင်လို့အခုလို ကာကွယ်ပိတ်ပင်တာအထိ လက်ခံလို့ရပေမဲ့ရေရှည်မှာ သွားရေးလာရေးတွေအခက်အခဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်…ဒီအခြေအနေက ဘယ်အချိန်ထိ ဖြစ်နေဦးမှာမသိတဲ့အတွက်အခြားရောဂါနဲ့ သေရေးရှင်ရေး ဆေးရုံဆေးခန်းသွားဖို့တောင်အတော်အခက်တွေ့နေပါတယ်…..အဲ့ဒီတော့ ကျေးရွာတွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ….?
နံပါတ်-1 ကျေးရွာတွေအနေနဲ့ မိမိရွာကိုကာကွယ်ချင်လို့ lock down ပုံစံမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် အခြားရွာကလူတွေသွားလာနိုင်အောင် လမ်းလွဲအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးရပါမယ်။
နံပါတ်-2 အဲ့ဒီလိုလမ်းလွှဲပေးဖို့အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုရင်… မိမိရွာထဲကအိမ်တစ်အိမ်ကိုအလည်အပတ်လာရောက်သူမဟုတ်ပဲ ဖြတ်သွားဖြတ်လာသာဆိုလျှင် လိုအပ်တဲ့ စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပြီး မိမိရွာလမ်းကပေးသွားသင့်ပါတယ်….
လက်ရှိအချိန်အထိ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ Lock down လုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကို အစိုးရကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပြီးသားပါ..ကျန်တဲ့ မိမိသဘောနဲ့ lock down လုပ်နေကျတာတွေက တရားဝင်မဟုတ်၍ ဥပဒေနဲ့မညီညွှတ်ပါဘူး
မိမိကျေးရွာကိုကာကွယ်တာအပြစ်မပြောလိုပေမဲ့ အခြားသူတွေရဲ့ အခက်အခဲနှင့် အခွင့်အရေးကိုလည်း ထည့်သွင့်စဥ်းစားသင့်ပါတယ်။ဒါတွေကို သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ထွေအုပ်တွေက ကြီးကြပ်သင့်ပါတယ်။လေးစားစွာဖြင့်…Crd#ဘဲဥပုပ်(SML)
ထိုင်းနိုင်ငံကို သွားမည့်သူများ မဖစ်မနေသိထားသင့်တဲ့ အရာများ